Maqaalo – PuntSom – kalasoco wararka
Khudbadii Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ee xiisada Tukaraq – Xaqiiq mise Been Qayaxan oo xaqiiqada ka fog?
May 27, 2018	Leave a comment 45 Views
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi (MBC) ayaa shir jaraa’iid oo uu qabtay Sabtidii uga hadlay dagaalka ka socda Tukaraq ee u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland isagoo gebi ahaan dagaalkaasi ku eedeeyey Dowladda Federaalka Soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho (Xamar)! Haddaba maqaalkan waxaan qodob qodob ugu eegaynaa qaar kamid ah hadaladii Muuse Biixi oo qaar kamid ah oo badan xaqiiqda ...
Khilaafka Imaaraatka & Soomaaliya iyo saameynta ciidamadii uu tababaray
April 15, 2018	Leave a comment 23 Views
Xiriirka dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Imaaraatiga Carabta oo bilihii lasoo dhaafay soo xumaanayey ayaa hada u muuqda inuu saameyn ku yeeshay xiriirkii wanaagsanaa ee ka dhaxeeyay Puntland iyo Imaaraatiga Carabta. Saraakiisha Amniga Puntland ayaa la sheegay inay shalay ka horjoogsadeen Tababarayaasha Imaaraatiga inay magaalada Bosaaso kala duulaan qaar kamid ah hubkii ay la yimaadeen wadanka. Diyaarad khaas ah oo ka ...
Dowlada Somalia Oo maanta si buuxda ula wareegaysa ciidamada Imaaraadka ay u tababareen
April 12, 2018	Leave a comment 43 Views
Muqdisho-(Puntsom)-Wasaarada Gaashaandhiga Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta si buuxda ula wareegeysa Ciidamada Milatariga ee ay tababareen dowlada Imaaraatka Carabta. Xarunta wasaarada Gaashaandhiga ayaa maanta la filayaa ina lagu qabto munaasabada maalinta aas aaska ciidanka Milatariga Soomaaliya, kadibna waxaa munaasabadaasi Dowlada ay kula wareegi doontaa ciidamada ay Imaaraatka u tababareen. Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumada Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan, ayaa sheegay in ...
Maxay Soomaalidu ka faaiidey isticmaalka faraha badan ee Baraha Bulshada-(Akhriso)
April 11, 2018	Leave a comment 24 Views
Bosaso-(Puntsom)- Isticmaalka Baraha Bulshada ayaa sanadahii ugu dambeeyay si wey ugu baahayay dunidan aynu ku nool nahay. Soomaalida ayaa ka mid ah Umadaha sida aan kala joogsiga lahayn u isticmaalla aaladahan lagu wada xiriiro ee loo yaqaan Baraha bulshada (social Media), inkastoo ay Soomaalidu ku kala dheereyso isticaamlka aaladahan ayaa marka la tilmaamo aaladda ugu badan oo ay Soomaalidu isticmaasho ...
Galmudug Casharo kama bartan weli waayo-aragnimadii hore (Qore Cabdiwali Gooni) Maqaal Xasaasi ah…
September 27, 2017	Leave a comment 44 Views
Galmudug waxaa la asaasay August 11,2006 xilligaas oo Madaxweyne maamulkaas u doorteen Maxamed Warsame Cali ( Kiimiko ) iyadda oo dastuurka ku qortay in mudada xil haynta Madaxweynaha tahay 3 sanno. Saddex sanno ka dib sanadkii 2009, ayaa doorasho mar kale maamulkaasi galay waxaa Madaxweyne loogu doortay Maxamed Warsame Caalin, inkastoo uu xilka ku qabsaday Musharaxii kale Axmed Shariif Cali ...
FAALLO:Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxay Ku kula duwanyihiin dhanka Siyaasada gudaha iyo caalamka.
June 21, 2017	Leave a comment 33 Views
Waxaa dalka Somalia kasoo arrimiyay dowlado dhowr ah oo midba mida ka danbeysa ka wanaagsaneyd marka la’eego isbedelada dhanka Siyaasada, Amniga iyo Xiriirka Caalamiga ah. Dowladii uu Hogaaminaayay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diirada saari jirtay dhinacyada Siyaasada iyo Xiriirka Caalamiga, waxaana jiray guux ay isla dhexmarayeen shacabka Soomaaliyeed oo muujinaayay in dowlada Xasan Sheekh ay ka gaabin jirtay dhanka Amaanka. Dowladii dhacday ee Xasan ...
Fariin:Madaxwayne Farmaajo Muqdisho Muran uma roona (Qormo)
June 1, 2017	Leave a comment 26 Views
Qormadaydan kooban ayaan ugu tala galay tala wadaag furan Madaxweyne Farmaajo taasoo kusaabsan xog’ogaal nimadayda Xaalka Muqdisho in ay madaxdu ila wadaagto. Doorashadii madaxweyne Farmaajo ee 8 Febraayo Caasimadda Muqdisho waxay marti unoqotay Xilkaqaadis fara badan oo hal mar, qaraxyo, dilal joogta ah iyo ugaarsi Ciidamada qaranka oo loogu magac-daray hubka dhigis oo anigu u qaadtay in ay Muqdisho ugaar ...
(FAALLO):Goormaa iigu dambeysay!!!?
April 29, 2017	Leave a comment 30 Views
Goormaa noogu dambeysay in Madax sare oo ka tirsan Dowladda Soomaaliya oo inta soo dhex gasha Shacabka la shaaheeysa, waxaa iigu dambeysay haddaan dambaabin Xilligii Dowladdii Militariga aheyd oo uu Madaxda ka ahaa Jaalle Maxamed Siyaad Barre, waxaana ka xasustaa dhowr mar oo aan la kulmay, waxaana ka mid aheyd mar uu noogu yimid Kulliyadda Lafoole horraantii 80-kii oo uu ...
QORMO: Dhacdooyinkii layaabka lahaa ee aan arkay Guusha Madaxwayne Farmaajo kadib (AKHRISO)
February 10, 2017	Leave a comment 1,653 Views
Dhacdooyinkii layaabka lahaa ee aan aragnay Guusha Madaxwayne Farmaajo kadib. 1) Dadkii murashaxiinta kala taageerayay oo guushii Farmaajo ilaaway in musharaxii ay wateen laga guulaystay ayna u wada hambalyeeyeen madaxwaynaha cusub iyagoo qirsan in 1 qof uusan guulaysan ee umadda Soomaaliyeed ay wada guulaysteen taasoo ahayd markii ugu horeysay ee aan arko dad Soomaaliyeed oo sidaas u niyad san. 2) ...
TUBTA TOOSAN:- Xadka Qaynuuniga ah iyo Suxufinimada Soomaaliya maxaa kala haysta?
January 17, 2017	Leave a comment 239 Views
Xadka Qaynuuniga ah;– Xaq ayuu u leeyahay qof kasta in uu si madaxbanaan u cabiri karo Ra’yigiisa una faafin karo,taasi waxay ka midtahay Xuquuqda aadamiga ah ee caalami ahaan la wada aqoonsanyahay. Macnahu ma’ahan markii sidaas la leeyahay in dadka lo ogolyahay in Ra’yigooda iyo afkartooda ay u cabirkaraan si xadka aadamiga ah dhaafsiisan.taasi wadamda sharcigu ka jiro waxaa lagu ...
Muxuu Galabsaday? W/Q: Cabdiqani Maxamed Cabdilaahi
December 8, 2016	Leave a comment 132 Views
Waxaan ahaa wiil ku noolaa Hargeisa gaar ahaan xaafadda sheikh madar, waxaan ku soo koray nolol aad u qalafsan. Somaali Ayaan ahay, gaar loo sooci jiray walina la soocayo, Waa lay takoori jiray maan aqoon sababta lay takoorayay, waayo waxaan la mid ahaa walaalahayga aanu wax wada baran jirnay, xanuun ii gaar ah maan qabin, wajigaygu muuqaal gaar ah muu ...